Qodobka 1-aad: Liverpool 2-0 Chelsea: Mane (51′), Salah 53′) Reds ayaa hogaanka EPL labo dhibcood ku qabatay ayadoo Man City kulan baaqi u yahay kadib markii guul muhiim ah Chelsea ka heleen.
Qodobka 2-aad: Crystal Palace 1-3 Man City: Sterling (15′, 63′), Milivojevic (81′), Jesus (90′): City ayaa guul weyn kusoo gaartay ayadoo safar ah waxayna cadaadis ku hayaan Liverpool oo labo dhibcood hogaanka EPL kaga heyso balse kulan baaqi u yahay.
Qodobka 3-aad: Lille 5-1 PSG: Kooxda Lille ayaa xaquus weyn u geesatay dhigeeda PSG una diiday todobaadkan inay u dabaal dagto hanashada horyaalka France.
Qodobka 4-aad: Dusseldorf 1-4 Bayern: Coman, Gnabry & xidigaha kale Bayern oo ka caawiyeen naadiga Niko Kovac hogaamiyo inay dib ugu soo laabtay hogaanka Bundesliga oo ay labo dhibcood kaga hayaan Dortmund waxaana ka harsan 5-kulan.
Qodobka 5-aad: Chievo 1-3 Napoli: Kalidou Koulibaly ayaa labo jeer shabaqada gaaray cayaar Napoli guuleesatay una diiday Juventus inay todobaadkan u dabaal dagaan hanashada Serie A-da.
Qodobka 6-aad: Frosinone 1-3 Inter Milan: Nainggolan, Perisic iyo Vecino ayaa Inter ka caawiyeen inay booska 3-aad Serie A-da xirtaan.
Qodobka 7-aad: Kooxda Man City kama hor istaagi doonto Gundogan inuu xagaagan ku biiro Inter Milan madaama ay booskiisa keensan doonaan Sual Niguez oo Atletico Madrid khadka dhexe uga cayaaro.
Qodobka 8-aad: Real Madrid ayaa diyaarineyso €70 million inay kusoo qaadato Luka Jovic oo weerarka uga cayaaro Eintracht Frankfurt balse milkiyadiisa leedahay Benfica.
Qodobka 9-aad: Mbappe aabihiis ayaa qaati ka taagan wararka sheegayo in wiilkiisa xagaagan Real Madrid ku biirayo wuxuuna sheegay inuusan meelna kaga soconin naadiga PSG.
Qodobka 10-aad: Macalin Zidane ayaa saxaafada u sheegay in kooxda Real Madrid cayaartooy badan xagaagan iibin doonto ka hor inta aysan suuqa galin oo aysan cayaartooy cusub soo qaadanin.
Qodobka 11-aad: Paul Pogba ayaa ku kalsoon in kooxdiisa Man United ka yaabsan karto Barcelona natiijo wanaagsana kusoo gaari karto garoonka Camp Nou kulanka habeen dambe lagu balansan yahay wareega 8-aad Champion-ka lugtiisa labaad.
Qodobka 12-aad: Garsooraha Jarmalka ah Felix Brych ayaa loo xil saaray inuu dhex dhexaadiyo kulanka weyn habeen dambe dhex mari doono Barcelona vs Man United. Waxaana xusid mudan in garsoorkan Barcelona 5-kulan tartamada Yurub ah ugu dhex dhexaadiyay garoonkeeda Camp Nou waxay guuleesteen labo kulan halka labo kulana bar baro galeen kulana laga badiyay.
Qodobka 13-aad: Juventus ayaa xagaagan gacanta kusoo dhigeyso Samuel Umtiti waxayna heshiis hoose wada gaareen Barcelona oo ah Juve ka leexato Matthijs de Ligt oo Ajax ka tirsan kaasi oo Barcelona iibsaneyso iyadana waxaa laga iibinaa Umtiti.
Qodobka 14-aad: Chelsea ayaa indhaha la raaceyso wiilka lagu magacabo Alexander Isak oo lagu tilmaamo New Zlatan kana tirsan naadiga Dortmund.
Qodobka 15-aad: Man United ayaa wakiil Mino Raiola kaga digtay inuu wada hadalo qarsoodi ah a galo kooxaha Juventus iyo Real Madrid sidii uu Pogba Old Trafford kaga wadi lahaa madaama maamulka United qaateen go’aan ah in Pogba kooxda sii joogo.
Qodobka 16-aad: Liverpool ayaa ku hungowday helista Timo Werner oo kusii dhawaanayo ku biiritaanka Bayern Munich sida kooxdiisa RB Leipzig xaqiijisay.
10:00 pm Watford vs Arsenal
10:00 pm Leganes vs Real Madrid